ကြယ်ကြွေတို့ရဲ့ အတောင်ပံ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြယ်ကြွေတို့ရဲ့ အတောင်ပံ..
Posted by we R one on Jun 14, 2011 in Creative Writing |7comments
ဆရာမဂျူးရေးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲ က ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံး တစ်အုပ်ပါ။ နာမည် က ကြယ်ကြွေတို့ရဲ အတောင်ပံ .. ဒီက သူငယ်ချင်းများ လည်း ဖတ်ဖူး ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းအရာကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ က ကျွန်းတစ်ကျွန်ရဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာ က 16 နှစ်အရွယ် ကောင်းမလေးတစ်ယောက် အဲဒီရွာက အိမ်ထောင်ရှိ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စော်ကားခြင်း ကိုခံရ ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတယ်။ အဲဒီ စော်ကားတဲ့ လူ က အိမ်ထောင်ရှိတယ်. ကောင်မလေး ကို မယူနိုင်ဘူး ။ ကောင်းမလေး ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ် ဆိုတာ တစ်ရွာလုံးက သိသွားတော့ ကောင်မလေး က ရှက်လို့ ရွာကနေ ထွက်ပြေး ။ နောက်တော့ ကလေးမွေး ၊ ရန်ကုန်ရောက် ၊ ကလေး က ဆရာ ၀န်ဖြစ်သွား ။ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက်ရှိမှ ရွာကိုပြန်ပေါ့.။။ အဲဒီအကြောင်းပါ။
အဲဒီ မှာ ကျွန်မ အဓိက ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းက ဒီမိန့်ကလေးက မတရားစော်ကားခြင်းကို ခံခဲ့ရတာ ၊ ကိုယ်ဝန်လည်းရှိလာရော တစ်ရွာလုံး ရဲ့ တံတွေးခွက်မှာ ပလက်မျောခဲ့ရတယ်၊ လူတစ်ကာရဲ့ လက်ညိုး ထိုးခြင်း ကိုခံခဲ့ရတယ်။ မျက်နှာမပြရဲ အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တကယ်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင် ဆတ်ဆော့ လို့ ဖြစ်ရခြင်းလည်း မဟုတ်။ နှမချင်းမစာနာ ၊ စော်ကားသွားတဲ့ မုဒိန်းကောင် တကယ့်တရားခံက ဘုရားသွား၊ ကျောင်းတက် ၊ ကျော့ကော့ နေအောင်ဝတ် ပြီးလူတော တိုးလို့။
တကယ်တော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အနေနှင့် လင်မရှိပဲ ဗိုက်ကြီးတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်ယူပါမယ် ကတိမျိုးစုံပေးပြီး. စားပြီးနာမလည် လုပ်သွားတဲ့ ယောက်ျား က ပိုရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ သူ့ မွေးတဲ့သား က ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတော့ သူရွာပြန်တဲ့အခါမှာ သူအရှက်ရခဲ့ သမျှ သူ့သား က ဆရာဝန် ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ တင် ခြေဖျက်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…
တင်ပေးချင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ စာအုပ် ကိုဖတ်ရ တာ ပိုဖတ်လို့ကောင်းတယ်
weRone ရေးပေးထားတာကို ဖတ်ပြီး ဇာတ်လမ်းကျောရိုးလောက်တော့ သိသွားရတယ်။ မဖတ်ဖူးပေမယ့် ဒီလို အသိပညာပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးတွေက အကျိုးရှိပါတယ်။ ပြင်သင့်တာတွေ၊ ဆင်ခြင်သင့်တာတွေ၊ ရင်နင့်စရာတွေ ပြုပြင်ဆင်ခြင်နိုင်ကြရင် လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်တာပေ့ါ နော်။
စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ … ။ အွန်လိုင်းက ဖတ်လို့မရဘူးလားဟင်… ။
ကျမသာ ထို မိန်းကလေး နေရာမှာဆို … သူများ တံတွေးခွက်ထဲ ပက်လက်မျောမဲ့ အတူတူ ဟို ငနာကိုပါ အသေဖဲ့ပြီး ဘ၀ပျက်အောင် လုပ်ခဲ့ဦးမှာပါပဲ … ။
ဒီစာအုပ်လေးက အရမ်းကောင်းတယ် နွယ်ပင်လဲ ဖတ်ဖူးတယ် ဆရာမဂျူးရဲ့ စာအုပ်တွေ တော်တော်များများက လူငယ်တွေအတွက် အတုယူစရာလေးတွေပါတက်ပါတယ် .နွယ်ပင်ကတော့ ဆရာမဂျူးရဲ့ စာအုပ်တွေဆို မလွတ်တမ်းဖတ်ဖြစ်တယ် နွယ်ပင်တို့ အရွယ်မရောက်တစ်ယောက်က ထွက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးတောင် မိတ္တူဆိုင်က ဝယ်ပြီးဖတ်လိုက်သေးတယ် . အခုတော့ အဲ့စာအုပ်လေးက စာမူခွင့်ပြုချက်ရသွားလို့ စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဝယ်လို့ရနေပါပြီ….
အဲလိုစာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဝေဖန်ချက်လေးတွေရေးကြည့်ပါလား ..
ကျွန်တော် လည်း ဆရာမဂျူးရဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများ ဖတ်ဖူးပါပြီ။
အရမ်းကြိုက်လို့ဝယ်သိမ်းထားတာတွေတောင် 10 အုပ်လောက်ရှိပြီ။ အမုန်းကြောင့် ဖြစ်သော စစ်ပွဲများ…
သူ မင်းကို ဘယ်တော့မှ…။ တိမ်နဲ့ ချည်တဲ့ ကြိုး…။မြစ်တို့၏မာယာ..။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဆောင်ပါးတွေ..။ ကောင်းကင်မပါသောည… ။ အများကြီးပဲ ကြိုက်တာတွေ..။အခုနောက်ဆုံး ထွက်ိထားတာက ပိုချစ်ရတဲ့ သူ ကိုယ်ပဲ ဖြစ်ပါရစေ…တဲ့ ။ကောင်းတယ်။ သူ့စာအုပ်တွေတော်တော်များများရှိတာက ကျော်ကျော်ဦးဘလော့ဂ်……။ ၀င်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ဂျူးစာတွေကို ချစ်တဲ့သူ အချင်းချင်း ခင်မင်ချင်ပါသေးတယ် ။ သူ့ စာတွေအကြောင်းဆွေးနွေး မယ်လေ..။
ကျွန်တော့်ဆီ ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ alinsett.art@gmail.com